रवि लामिछानेलाई राजनीति उतार्ने पार्टी खोल्न लगाउने अर्कै मान्छे रहेको खुलासा ! - Compaq News
रवि लामिछानेलाई राजनीति उतार्ने पार्टी खोल्न लगाउने अर्कै मान्छे रहेको खुलासा !
पत्रकारिता यात्रालाई सदाका लागी बिट मारेर पुर्णकालिन राजनितिक यात्रामा होमिएका रवि लामिछानेले आफ्नै परिवारको भने साथ पाउँन सकेका छैनन् । उनकै सहोदर दाजु हरिशरण लामिछानेलाई उनको पारा फिटिक्कै मन परेको छैन ।
रवि लामिछानेले हतारमा राजनितीमा हाम फालेर ठूलो गल्ती गरेको भन्दै उनका सहोदर दाजु हरिशरण लामिछानेले यस्तो कच्चा पाराले राजनितीका केहि पार नलाग्ने ठोकुवा गरेका छन् । हरिशरणले आफ्नै भाई रविले आफ्नै भविश्य माथी खेलवाड गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन्।
ओटिभी नेपाल डटकम सँगको कुराकानीमा हशिरणले रविले हतारमा कच्चा काम गरेको भनेका छन् । भाइ भएका कारण व्यक्तिगत रुपमा रवि प्रति माया र आर्शिवाद रहेको तर उसको सिद्धान्त र विचार प्रति सहमत हुन नसक्ने भन्दै उनले आजीवन रविको पार्टीमा नजाने घोषणा गरेका छन् ।
रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र चुनाव चिन्ह घण्टी प्रति पनि हरिशरणले आपत्ती जनाएका छन् । स्वतन्त्र पार्टी भनेर नाम राख्नै नपाउँने जिकिर गर्र्दै उनले यो राजनितिक विज्ञानको पनि विपरित भएको बताएका छन् ।
नेपालीको नाम पनी अल्बर्ट राख्न त पाइयोनी भन्दै उनले रविले प्रस्ताव गरेको पार्टीको नाम निर्वाचन आयोगले दिनै नहुने बताएका छन् । कुनै पनि रिसर्च नगरी रवि राजनितीमा हाम फालेको भन्दै उनले घन्टी अर्कैैको चुनाव चिन्ह भएको समेत थाहा नपाउँने भने पछि कस्तो पारा होला भनेर प्रश्न पनि गरेका छन् ।
रविले यत्ति महत्वपुर्ण कदम चाल्नु भन्दा अघि दाजुको नाताले आफुसँग एक वचन सल्लाह पनि नगरेको भन्दै उनले दुखेसो पोखेका छन् । केहि समय अघि रविलाई आफुले यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिन लागेको भनेर बताएको दाबी गर्दै उनले त्यस पछि रविले हतार हतार टिभीमा गएर राजिनामा दिएर राजनितीमा आएको जिकिर गरे ।
मैले स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गरे पछि मलाई समेत जानकारी नदिइ गोप्य राखेर हतार हतार राजनितिमा हाम फाल्नुले के अर्थ राख्छ भन्नुस् त रु भन्दै लामिछानेले प्रश्न गरेका छन् ।
सिद्धान्त नमिल्ने जो कोहीसँग पनि आफ्नो सहकार्य हुन नसक्ने प्रष्ट पादैै उनले भाइ त परको कुरा भएको पनि भनेका छन् ।
रविको पछिल्लो कदमप्रति फिटिक्कै सहमत हुन नसकेका हरिशरणले कुन दिन रविले ल मैले त सकिन भनेर देशै छोडेर चल्दिन सक्ने पनि बताएका छन् ।
ग्योलेक्सी फोर के टिभी खोल्ने बेलामा म यस्तो प्रोग्राम गर्छु ,उस्तो प्रोग्राम गर्छु भनेर भनेको तर गर्न नसकेको भन्दै उनले कुन दिन उसै गरि राजनिती गर्न सकिएन भनेर देश छोड्न सक्ने आंकलन पनी गरेका छन् ।
हरिरशरणले रविले अहिले जे जस्तो काम गरिरहेका छन् उनलाई चलाउँने मान्छे पर्दा पछाडी अर्कै भएको पनि दाबी गरेका छन् । अरुको कुरा सुनेर रवि अघि बढीरहको भन्दै उनले यस्तो पाराले सहि गन्तव्यमा नपुर्याउँने ठोकुवा पनि गरे ।